Eden Hazard Oo Dhaawac Kale Soo Wajahay Iyadoo Real Madrid Ay 2-1 Gurigeeda Kaga Badisay Alaves Kulan Ka Tirsan La Liga.
HomeHoryaalka SpainEden Hazard oo dhaawac kale soo wajahay iyadoo Real Madrid ay 2-1 gurigeeda kaga badisay Alaves kulan ka tirsan La Liga.
Hazard, oo 29 jir ah, ayaa Real Madrid kaga soo biiray Chelsea lacag ka badan150m 2019.
Laakiin xiddiga reer Belguim ayaa kaliya 27 kulan u ciyaaray kooxda Zidane tan iyo markii uu lacag badan ku soo iibsaday.
Hazard ayaa seegay bilowgii xilli ciyaareedka dhaawac muruqa ah oo ka soo gaadhay lugta midig wuxuuna maamulay seddex kulan ka hor inta uusan tijaabin cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ bilowgii Nofeembar.
Waxa uu tan iyo markii uu bilaabay kulankii Villarreal 21kii November waxana uu dhaliyay rigoore kulankii Arbacadii ee Champions League ee ay ka badiyeen Inter Milan, isagoo ciyaaray 65 iyo 78 daqiiqo siday u kala horreeyaan kulamadaas.
Laakiin weeraryahanku wuxuu socday wax ka yar nus saac maalintii Sabtida, isagoo dhibaato kale ka qabatay lugta habeen niyad jab leh Real kulankii ka dhacay garoonka Alfredo di Stefano.
“Eden, waxaan u maleynayaa waxaana rajeynayaa inay aheyd uun jug fudud. Taasi waa wuxuu noo sheegay. Taasi waa uun garaac, mana ahan muruq,” ayuu yiri tababare Zidane guuldarada kadib.
Martigaliyayaashu waxay bilaabeen iyaga oo aan lahayn dhowr tirooyin muhiim ah. Kabtan Sergio Ramos iyo weeraryahan Karim Benzema ayaa si weyn looga seegay daafaca iyo weerarka siday u kala horreeyaan, halka tababare Zidane uu sidoo kale dhaawacyo ka qabay Dani Carvajal iyo Federico Valverde.
Seddex guuldarro, Real ayaa lumisay inta jeer ka dib 10 kulan xilli ciyaareedkaan sida looga badiyay 38 xilli ciyaareedkoodii ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedka 2019-20.
Waxay haatan u safrayaan Shakhtar Donetsk Talaadada (17:55 GMT kick-off) kulankooda wareega group-yada Champions League, halkaasoo guushu ay u xaqiijin doonto u soo bixitaanka wareega 16ka.